Sida Loo Sameeyo Ololaha Dhibcaha E-mailka ee WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida Loo Sameeyo Ololaha Dhibcaha E-mailka ee WordPress
Sida Loo Sameeyo Ololaha Dhibcaha E-mailka ee WordPress
Ololayaasha dhibcooyinka iimaylka ayaa ah qayb muhiim ah oo ku jirta istaraatiijiyada suuqgeynta iimaylka guud taaso keenta in qiimo furan iimaylka oo wanaagsan, guji-gudbinta iyo ka-qaybgalka. Waxay yihiin mid ka mid ah farsamooyinka suuq-geynta iimaylka ee la isku dayay oo la tijaabiyay si fudud shaqada.
Ololayaasha suuq-geynta dhibcooyinka iimaylka waxaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan oo ah hawlaha suuq-geynta iimaylka oo ay ku jiraan wargeysyada, wax soo saarka/adeegta cusboonaysiinta, iimaylada gaadhiga wax iibsiga ee la dayacay, xayaysiisyada xafladaha, iyo qaar kaloo badan.
Maqaalkan, waxaan uga hadli doonaa noocyada kala duwan ee ololaha dhibcooyinka iimaylka iyo sida loo dhiso iyaga oo isticmaalaya MailChimp. Ugu dambeyntii, waxaanu u abuuri doonaa macaamiishayada WPExplorer ololahayaga dhibco iimaylka ah, oo muujinaya sida aad u isticmaali karto suuq-geynta dhibco si aad u horumariso oo aad u kordhiso beddelka alaabtaada WordPress.
Hordhaca Ololaha Dhibcaha ee iimaylka
Weligaa ma la yaabtay sababta aan ereyga 'dhiibitaan' ugu isticmaalno ololeyaasha dhibicda iimaylka? (Weligay taas waan la yaabanahay.) Hagaag, waxaa dhiirigeliyay waraabka dhibicda - farsamada biyaha goosashada ee beeraha, halkaas oo biyaha la ururiyo oo loo gudbiyo ciidda. aad u tartiib ah. Biyaha waxa lagu ururiyaa dhibco ahaan waxaana loo sameeyaa si toos ah xididka geedka.
Ololaha dhibicda kuma koobna oo keliya iimaylka – ereyga waxa kale oo uu quseeyaa boostada tooska ah iyo suuqgeynta ku saleysan taleefoonka, sidoo kale. Laakiin aan diiradda saarno email ololayaal dhibicyo, miyaynu?
Caqabada leh Wargeysyada Emailka ee Fudud
Marka ay timaado wargeysyada iimaylka, suuqleydu waxay leeyihiin dhibaato guud. Marka qof ku biiro warsidaha, kaliya waxay arkaan cusub emails, oo aan ahayn kuwii hore loo soo diray. Dhibaatadan waxaa lagu xoojiyay ololaha suuq-geynta iimaylka ee alaabada iyo adeegyada kala duwan. La'aanteed olole dhibco iimaylka ah, macaamiishu waxay mararka qaarkood waayaan macluumaadka muhiimka ah sida sida loo bilaabo, ogeysiisyada muhiimka ah, cusbooneysiinta alaabta, iyo qaar kaloo badan.
Ololaha dhibicda iimaylka ayaa u sahlaysa suuqgeyn inuu habeeyo oo shaqsiyeeyo iimaylada loo diro macaamiil kasta oo cusub. Waxaa loo yaqaan magacyo kale oo badan - suuq-geynta suuq-geynta, ololaha email-ka otomaatiga ah, emails-nololeedka, jawaab-bixiyeyaasha autoresponders iyo automation marketing, iwm. Fikradda waa isku mid - ololeyaal email drip waa emails suuqgeyn ah oo si toos ah loogu diri doono jadwalka.
Qeybinta iyo Shakhsiyeynta
Kuwani waa labada tiir ee waaweyn ee ololaha dhibicda iimaylka wanaagsan. Qaybinta waxay noo ogolaataa inaan u qaybino macaamiisha kooxo kala duwan, shakhsiyeynta waxay noo ogolaaneysaa inaan u dirno iimaylo badan oo khuseeya mid kasta oo ka mid ah kooxahaas, taas oo kordhinaysa fursadaha beddelka.
Aan tusaale usoo qaadano. Dhammaanteen waxaan isticmaalnay Dropbox. Dropbox waxay leedahay laba nooc oo macaamiisha aasaasiga ah - bilaash iyo lacag. Taasi waa heerkooda koowaad ee qaybinta. Ujeedada laga leeyahay labadan kooxood (ama qaybaha) aad bay u kala duwan yihiin.
Ololaha dhibicda iimaylka ee loo diray kooxda koowaad waxay baraan macmiilka sifooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee Dropbox, ka dhaadhicinta qofka inuu u cusboonaysiiyo nooc lacag ah.
Dadka ku jira kooxda labaad waxay horeba u siiseen macmiisha, sidaas awgeedna ujeedada kooxda labaad waxay noqon doontaa inay ka qayb qaataan oo ay sii haystaan ​​macaamiisha lacag bixinta.
Shakhsiyaynta waxa ay awood kuu siinaysaa inaad dirto iimaylo ka kooban magaca koowaad ee qofka, alaabta ay eegtay iyo qaar kaloo badan. Halkan waxaa ah iimayl la gaaryeelay oo ay soo dirtay Airbnb, goorma Jimmy lagu arkay guri-guri oo sariir iyo quraac ah oo ku yaal Portland.
Sida Jimmy ku tilmaamay boggiisa blog-ka, iimaylkan ayaa runtii loo soo diray maalin gudaheed ka dib markii la arkay guriga. Airbnb waxay habaysay magaca, iyo waxa ku jira iimaylka oo leh hantida uu Jimmy arkay maalintii kale. Waxa kale oo ay ku dareen qaar ka mid ah "guryaha lagu taliyay" kuwaas oo la mid ah kuwii Jimmy uu horay u soo diray, oo sidaas awgeed fursad sare u leh in la gujiyo.
Xeeladaha Ololaha Dhibcaha ee Emailka Guud
Ololaha dhibcooyinka iimaylka ayaa leh hal yool oo ay wadaagaan: u beddel macaamiisha tijaabada ah oo ku dadaal. Waa maxay sababta ay macaamiishu ula socdaan? Si ay u sii wataan isticmaalka alaabtaada. Alaabtaadu waxay ku raaxaysataa joogitaanka maskaxda ee macaamiishaada, taas oo ka ilaalinaysa inay u tartamaan tartanka mar kasta oo ay wadaan xayeysiis. Waxaan u kala jebinay ololayaasha suuqgeynta iimaylka siyaabo kala duwan oo loo isticmaalo waxaana la wadaagnay tusaale qayb kasta.
E-mayl soo dhawow
Iimeylkan waxa la soo diraa mar kasta oo macaamiil u saxiixo alaabtaada ama adeegaga. Waa inay ahaadaan kuwo qallafsan, ka qaybqaadanaya oo waa inay u horseedaan macmiilka CTA - taas oo ah furitaanka abka ama saxeexa shabakada.
Iimayllada soo dhawayntu waa inay ka koobnaadaan kuwan soo socda:
Sida loogu bilaabo alaabta - oo ay ku jiraan isku xirka saldhigga aqoonta, golayaasha taageerada iyo muuqaallada bulshada.
Badhanka iska-diiwaangelinta - dhammaan iimaylada waa inay sidan lahaadaan!
Aan eegno iimaylka soo dhawaynta ah ee uu soo diray Asana - app-ka laad-dameerka wada shaqaynta leh ee ay dhiseen aasaasayaasha Facebook.
Waxa ku jira hal CTA oo cad - bilaabay Asana. Waxa kale oo ay baraysaa isticmaalaha sida uu u bilaabo saddex tillaabo oo fudud, waxana uu leeyahay xidhidooyin badan oo hoos yimaada tillaabo kasta. Isticmaaluhu waxa laga yaabaa inaanay qasab ku gujin, laakiin way jiraan haddii ay u baahan yihiin.
Haddii qof uu ku biiro warsidahaaga, waxaad isticmaali kartaa faleebo soo dhaweyn leh si aad si toos ah ugu dirto isticmaalaha qaar ka mid ah qoraalladaada blog-ka ee aadka loo wadaago. Ama, haddii aad hesho saxiix heer tijaabo ah oo cusub adeegaaga, isku day dhibco ka muuqda daraasado ku saabsan sida macaamiisha kale u isticmaalayaan alaabtaada.
Ugu yaraan, iimaylada soo dhawayntu waa hab fiican oo lagu yidhaahdo, "Hey halkaas, way fiican tahay inaan kula kulmo!"
Warqadda cad ee khabiirka emayllada soo dhaweynta waxay muujineysaa in iimaylada soo dhaweynta ay ku raaxaystaan ​​58.7% celcelis ahaan heerka furan, halka iimaylada caadiga ah ay fadhiyaan agagaarka 14.6%. Marka iimaylkaas soo dhawaynta ah si degdeg ah loo soo diro (sida isla markaaba isticmaaluhu saxeexo), heerka furan wuxuu u boodaa 88.3%.
Emaillada dusha saaran
Ujeedada iimaylka soo dhawayntu waa in qofku isticmaalo ama furo app-ka. Laakiin taasi maaha waxa kaliya ee isticmaalaha ku habboon uu sameeyo. Si aad qiimo uga hesho alaabtaada ama adeeggaaga, macmiilkaagu wuxuu u baahan yahay inuu dhab ahaantii sameeyo isticmaalka alaabtaada. Taas oo macnaheedu yahay, waxay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabada ugu horreysa.
Haddii ay dhacdo Asana, taasi waa abuurista hawsha ugu horreysa.
Haddii ay dhacdo Dropbox, soo dejinteeda iyo ku rakibida barnaamijka desktop Dropbox. (Maya, maaha app-ka mobaylka, laakiin midka desktop-ka).
Waa kan tusaale iimaylka dusha sare ee Asana. U fiirso sida ay ugu jirto laba CTA, labaduba waxay tilmaamayaan fal isku mid ah!
Iimayl-la-soo-jeedintu waa laf-dhabarta ka-haynta isticmaalayaasha. Qof kasta oo ka socda Netflix, ilaa Spotify, ilaa Instagram, ilaa Quora wuxuu adeegsadaa talooyinka la gaaryeelay si ay isticmaalyaashooda ugu mashquuliyaan. Heerarka shakhsiyaynta ee weyn waxay keentaa heerar furan oo wanaagsan.
Aan soo qaadanno Quora tusaale ahaan. Waxaan la socdaa mowduucyo gaar ah oo ku saabsan Quora, kuwaas oo aniga i xiiseeya. Quora waxay isticmaashaa xogtan si ay iigu soo dirto iimayllada talada maalinlaha ah, iyadoo rajeynaysa inaan sii wado hubinta iyaga maalin kasta. Haddii aan jeclahay shay indhahaygu qabanayaan, waan ku dhufan karaa oo waxay toos iigu geyn doontaa app-ka.
Mawduuca loo adeegsaday iimaylkan runtii waa su'aasha lagu soo bandhigay xaga sare. Ma aha sida iimaylka ugu furmo "Sourav's digest" Taasi waa shakhsiyaynta 101 isla halkaas!
Algorithm-ka Quora ayaa go'aamiyay in iyada oo lagu salaynayo hawshaydii dhawaa ee Quora, in su'aashan la dhigo xagga sare ee iimaylka ay u badan tahay in aan ku kasbado gujiskayga. Oo bal qiyaas maxaa? Way samaysay!
Hawsha iimaylka cusboonaysiinta waa in lagu sasabo isticmaalaha in uu cusboonaysiiyo adeeggaaga. Waa inaad u dirtaa iimaylo cusboonaysiinta macaamiishaada si fiican ka hor taariikhda dhicitaanka, si ay uga warqabaan ballanqaadka.
Marketo waxay leedahay boosteejo baloog oo cajiib ah oo ku saabsan sida loo abuuro iimaylo cusboonaysiinta oo dhab ahaantii la furay. Marka laga reebo walxaha aasaasiga ah iyo kuwa dhexdhexaadka ah, hal muhiim ah oo la iga qaaday aniga ayaa ahaa xaqiiqda mid ka mid ah dhisi kara olole dhan oo ku wareegsan emailka cusboonaysiinta. Waxaad ku bilaabi kartaa xasuusin. Marka taariikhda cusboonaysiinta soo dhawaato, waxaad kordhin kartaa dareenkaaga degdegga ah. Tani waxay noqon kartaa 2-3 emails. Haddii aysan waxba shaqayn, isku day inaad dirto dhiirigelin - sida kuuban qiimo dhimis. Marka taariikhda dib u cusboonaysiinta ay dhaafto, oo macaamiishu aanu beddelin, waxaad isku dayi kartaa inaad dirto dhiirigelin weyn, adoo ku dhiirigelinaya isticmaale (laga yaabo inuu lumo) inuu dib u hawlgeliyo adeegga.
iThemes waxay soo dirtay iimaylka cusboonaysiinta oo leh dhiirigelin, oo ay weheliso dareen degdeg ah. Waxay bixinayaan qiimo dhimis 60% ah oo ay ku samaynayaan isdiiwaangelinta noloshooda oo dhan hadda jira macaamiisha. Oo haddii taasi ku filnayn, waxay sidoo kale bixinayaan isku xirka soo dejinta eBook cusub oo ay bilaabeen!
Farsamada Baqdinta Maqnaanshaha (FOMO):
Shaashadan shaashadda ah waxaan ku aragnaa sida iimaylka uu u kiciyo dareenka degdegga ah akhristaha, iyada oo tan samaynaysa waqti xaddidan, oo ku eg May 5, 2017. E-mailkan waxa la soo diray Abriil 27, taas oo ka dhigaysa muddada bixinta 10 maalmood.
Halkan waxaa ah qol yar oo lagu horumarinayo - koobiga ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu xuso in bixinta ay socoto 10 maalmood oo keliya (ama wax ka yar 2 toddobaad). Tani waxay abuuri doontaa a ka weyn dareenka degdega ah ee maskaxda akhristaha, marka loo eego sheegidda taariikh dambe. Farsamada FOMO waa farsamo suuqgeyn oo la tijaabiyay oo loo yaqaan si loo horumariyo sicirka furan, gujisyada iyo beddelka.
Xaqiijinta iimaylada waa macaamil ganacsi, kaas oo ku wargeliya isticmaalaha hawlahoodii dhawaa. Kuwani waxay u dhaxayn karaan wax kasta laga bilaabo iibsiyada ilaa boos qabsiga. Hay'adaha qaarkood waxay soo diraan iimaylo xaqiijin ah dhinaca amniga. Tusaale ahaan, marka aad ka soo gasho koontadaada Google qalab cusub, waxa aad helaysaa iimaylka xaqiijinta "cusub"
Xaqiijinta iimaylada inta badan waa macaamil ganacsi, oo macluumaadka u gudbiya isticmaalaha. Wargeysyo laba jeer-doorasho ah ayaa soo dira iimaylka xaqiijinta, si loo xaqiijiyo in isticmaaluhu uu dhab ahaantii saxeexay liiska waraaqaha. Aan eegno qaar ka mid ah iimaylada xaqiijinta ee sanduuqa-galahayga.
Iimaylkan, Jetpack waxa uu kula socdaa wakhtiga shaqada ee goobta WordPress oo waxa uu isla markaaba u dirtaa isticmaalaha marka wakhti dhimis la ogaado.
Waa kan tusaale kale oo ah iimaylka xaqiijinta ee Firefox soo diray.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah dhacdooyinka ka-qaybgalka, waxayna noqon karaan xayaysiis, falcelin-ku- jihaysan ama macluumaad dabiici ah.
Uber waxay qabataa shaqo aad u fiican oo la macaamilka isticmaalkooda, iyadoo lagu saleynayo nuxurka gudaha. Uber waxay xiriir la leedahay iibiyeyaasha caanka ah ee kala duwan ee magaalada si ay u siiyaan alaabtooda iyo adeegyadooda isticmaalayaasha Uber. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah Uber waxay rabtaa inay qiimayso isticmaalkooda, oo ay dejiso joogitaanka maskaxda ugu sarreeya. Markaa marka xigta aad ka fikirto inaad kor u qaaddo taksi, waxaad u malaynaysaa Uber.
Marka blog-kaagu uu jiro in muddo ah, waa waqtigii la kala saari lahaa nuxurka. Podcasts, eBooks iyo koorsooyinka tooska ah (ama la duubay) ayaa ah qaar ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan dhexdhexaadinta kala-duwanaanshaha nuxurka halkaas. Ololaha dhibicda iimaylka ayaa la abuuri karaa agagaarka koorso gaar ah ama podcast, si kor loogu qaado oo loogu helo isticmaaluhu inuu saxiixo ama dhageysto.
Iimaylkan, Chris oo ka socda RankXL ayaa wadaaga koorsadiisa cusub ee WordPress Blogging Academy. Tusaalaha ugu wanaagsan ee kala duwanaanshaha nuxurka iyo hogaaminta fikirka.
Iimayllada aan la xidhin ayaa ah "macasalaama iyo sagootin" ee suuqgeynta iimaylka. Waxaad xaqiiqsatay in aad hore u wayday macaamiil markii iimaylka la soo diro. Tani waa markii la ururin lahaa jawaab celinta isticmaalaha. Garoomada ay ka midka yihiin "waan ka xunnahay inaan ku aragno adiga" waa wax caadi ah. Waxa suurto gal ah in ay isbedel samayn karaan waa in la weydiiyo waxa qaldamay. Maxaa ka dhigay inay iska qoraan warsidahaaga? Waxa kale oo aad la wadaagi kartaa ciwaanka iimaylka tooska ah sarkaalka farxadda macmiilka u heellan si uu isticmaaluhu ula wadaago dareenkiisa.
Sida Loo Abuuro Ololaha Dhibcaha Iimaylka ee MailChimp
MailChimp waa suuqgeynta iimaylka ee aan jeclahay iyo madal otomaatiga ah. Si lagaaga caawiyo inaad bilowdo, halkan waa hagahayga bilowga ah ee MailChimp ee WordPress. Waad ku mahadsantahay moodelkeeda bilaashka ah ee weligiis, MailChimp waxaa jecel bulshada WordPress. Waxaa jira tiro badan oo ah plugins WordPress oo bilaash ah oo qaali ah oo ku saabsan sida loo kobciyo liiska iimaylka adoo isticmaalaya MailChimp.
Hadda aan aragno sida aan u dhisi karno olole fudud oo dhibco iimaylka ah anagoo adeegsanayna MailChimp.
Kuwani waa qaar ka mid ah qaababka iimaylka ee ay bixiso MailChimp. Waxa loo habeeyey meelaynta sawirka, cadadka qoraalka iyo qaabaynta iimaylka ee fal kasta oo la beegsanayo. Doorashada qaab-dhismeedka saxda ah waa tallaabo muhiim u ah ololahaaga dhibco ee iimaylka.
Tusaale ahaan, in ay Ogeysiis Samee template, MailChimp waxay ku bilaabataa iimaylka madax gaaban laakiin geesinimo leh iyo madax-hoosaad si ay ula xiriiraan qodobka ugu muhiimsan. Tan waxaa ku xiga sawirro, qoraal iyo ugu dambeyntii CTA.
Aynu khariidadda mid kasta oo ka mid ah jaantusyada u samayno kiisaska suurtogalka ah ee isticmaalka ololaha faleebada iimaylka ee aan hore u aragnay.
Template Kiisaska Isticmaalka Macquulka ah
Iibiya Alaabooyinka iimaylada xayaysiis ama Cusbooneysii
Ogeysiis Samee Iimayllada Cusbooneysii badeecada/adeegga
Sheeko sheeg Ku soo dhawoow, Soo gelid iyo Ka-qaybgal, iimaylo
Raadso Xaqiijinta, Cusboonaysiinta iyo iimaylada talo bixinta
Waxbarid Koorsooyin cusub iyo iimaylo ka-qaybgal
1. Abuur Olole Cusub
Marka hore, gal dashboardkaaga MailChimp oo samee olole cusub.
Kadib, guji Samee iimaylka.
Xulo Automated tab ka dibna dhagsii La wadaag wixii ku soo kordha blog. MailChimp waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ololeyaal iimaylo toos ah oo u dhexeeya saxiixyo cusub ilaa farabadan iimaylo la xidhiidha ganacsiga e-commerce. Waxaan abuuri doonaa emaylka cusboonaysiinta blog ee fudud, kaas oo ka shaqeeya quudinta RSS.
Deji magaca ololaha iyo liiska aad rabto inaad u dirto warsidahaaga. Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad isticmaasho MailChimp, waxaan ku talinayaa inaad abuurto liis dhumuc leh oo ka kooban ciwaannada emailkaaga, si khaladaadka loo arko si fudud. Sidoo kale isku day inaad isticmaasho noocyada kala duwan ee xisaabaadka iimaylka, sida Gmail, Outlook, iwm.
2. Habee quudinta RSS iyo wakhtiga
Hadda waa waqtigii la habeyn lahaa quudinta RSS. Haddii aad ku cusub tahay fikradda, waxaan kugula talinayaa inaad hubiso maqaalkayga - Hagaha Bilowga ee RSS ee WordPress.
Ka soo saar URL quudinta RSS blogkaaga oo geli goobta ugu horeysa.
Waxaad habayn kartaa gaarsiinta Wargeysyada maalin kasta, toddobaadle ama bil kasta. Casharradan, waxaan ku doorannay maalin kasta.
Haddii ay dhacdo wargeys toddobaadle ah ama bille ah, waxa fiican in la doorto maalmaha toddobaadka ee warsidaha la diro. Waxaad habayn kartaa inta jeer ee iimaylka iyadoo ku xidhan jadwalka iimaylkaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxa fiican in lagu xaddido warsidaha 2 emails todobaadkii. Xusuusnow, iimaylo aad u badan ayaa khatar gelin kara isticmaaluhu inuu gujiyo badhanka iska-diiwaangelinta!
Xulashada sawirka cabbirka waxay hubinaysaa in sawirada muuqaalka ah ee loo isticmaalo qoraallada blogku ay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan dhammaan aaladaha, oo ay ku jiraan mobilada, desktop-ka iyo tablet-yada.
Marka la diyaariyo, u gudub tallaabada xigta.
3. Qaybi liiskaaga (ama iimaylka qof walba)
MailChimp had iyo jeer waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka aad u qaybin karto liiskaaga. Dhab ahaantii, waxay kugu boorinaysaa inaad sidaas sameyso. Si kastaba ha ahaatee, maadaama kani yahay casharo oo liiska iimaylkana uu yahay liis dhumuc leh oo wata ciwaanada iimaylka, aan u dirno liiska oo dhan.
4. Samee emailkaaga
Bogga macluumaadka ololaha waa meesha wax badan oo ficil ah ay ka dhacaan. Tani waa halka aan ku habeyno xariiqyada mawduuca, qoraalka horudhaca ah iyo meelo kale oo badan. Iimayl otomaatig ah oo ka imanaya MailChimp waxay u baahan doonaan isticmaalka sumadaha isku-dhafka RSS. Waxaan ku talin lahaa in la dhex maro maqaalka aqoonta RSS, si loo helo faham wanaagsan. Marka la sameeyo, horay u soco oo dooro template ku habboon.
Waxaad ogaan doontaa in laba badhan oo cusub ay ka muuqdaan imayl-hayaha - Madaxa RSS iyo Waxyaabaha RSS. Waxaad ku jiidi kartaa block-yadan naqshadaynta iimaylkaaga, oo u habayn kartaa si waafaqsan.
Blocks RSS la beddeli karo gudaha MailChimp
Madaxa RSS ama walxaha, waxaad dooran kartaa inaad habayso waxyaabaha ka kooban blocks ama isticmaal kuwa ay horay u qeexday MailChimp. Casharradan, waxaan ku doortay Astaamaha ikhtiyaarka ah oo habeeyey cabbirka farta iimaylka. Marka la sameeyo, horay u soco oo dir iimaylka.
Kani waa badeecadii ugu dambaysay ee iimaylka ay dirtay MailChimp.
Tusaale: Dhisida Ololaha Dhibcaha iimaylka ee Alaabta WordPress
Haddaba maxay tahay suuq-geynta dhibco la xiriirta WordPress? Waa aalad suuqgeyn awood leh oo aad ka faa'iidaysan karto si aad u kobciso dhagaystayaashaada mareegaha, u kordhiso beddelka alaabada WordPress ee khadka tooska ah (mawduucyada, plugins, adeegyada iwm) oo aad ka qaybgeliso macaamiil cusub.
Bilowgii maqaalkan, waxaanu ku soo baarnay qaybaha kala duwan ee ololaha dhibcooyinka iimaylka sida soo dhawaynta, fuulista, iwm. Ololahayaga dhibcooyinka iimaylka waxa ku jiri doona iimaylka mid kasta oo ka mid ah qaybahan. Maadaama anaga WPExplorer aanu ku jirno ganacsiga horumarinta mawduucyada qiimaha sare leh waxaanu isticmaali doonaa wadarta mawduucayada si aan u muujino sida aad u isticmaali karto ololaha dhibco iimaylka xaalad nololeed dhab ah.
Kala qaybinta Ololaha dhibicda iimaylka
Kahor intaanan bilaabin, waxaa muhiim ah in la xasuusto in guusha ol'olaha dhibicda iimaylka ay kuxirantahay kala qaybinta iyo shaqsiyaynta.
Sideen u kala qaybin karnaa ololaheenii ugu horreeyay ee dhibicda iimaylka? Fudud Waxaanu u kala qaybinay iyada oo ku saleysan xaqiiqda in qofka helaya iimaylka uu yahay macmiilka WPExplorer ama macaamiil warsidaha caadiga ah. Tani waxay ina siinaysaa laba kooxood:
Macaamiisha ka iibsada mawduucyada qaaliga ah ee WPExplorer Envato (tusaale: Wadarta)
Dadka iska diiwaan galiyay warsidaha mareegaha.
Aan u abuurno olole dhibco iimaylka ah dadka dhawaan ka iibsaday mawduuca guud ee Envato.
Xusuusin: Tani waa tusaale uun. Kuwani maaha iimaylo dhab ah oo aad hesho marka aad gadato mawduuca wadarta ah. Themeforest ma siiso macluumaadkan gaarka ah iibiyeyaasha.
Qaybta 1 – Emailka Soo Dhawaynta
Kani waa iimaylka uu macaamiilku helo isla markaaba marka uu iibsado mawduuca wadarta ah. Iimaylkan, waxaanu ku xasuusinaynaa macmiilka wax ku saabsan iibsigiisa/iyada oo dhawaanahan.
Tusaalaha Soo Dhawaynta Iimayl ayaa loo diraa macmiilka isla markaaba ka dib marka la iibsado mawduuca wadarta ah.
In kasta oo ay ku habboon tahay in hal CTA oo keliya lagu haysto iimaylka, waxaan ku darnay dhowr kale oo lagu daro macluumaad dheeraad ah. CTA-da ugu weyn waa in macmiilku soo booqdo bogga Total theme, kaas oo u heellan inuu sharaxo dhammaan sifooyinka mawduuca.
Cutubka labaad, waxaanu kordhinay tirada isku xidhka la riixi karo ee boggaga macmiilku ka heli karo faa'iido, sida martigelinta, bandhigyada, sifooyinka mawduuca, iwm.
Waxa kale oo aad ka heli doontaa xidhiidh la'aanta si cad oo muuqata cutubka u dambeeya. Tani waxay u sheegaysaa macmiilka inaan ixtiraamno booskiisa sanduuqa, oo aanu doonayn inuu ku daro buuqa.
Waxa aanu ku jirin:
Soo dhawaynta iimaylada loo soo diro isla markaaba iibsashada ama isdiiwaangelinta waxay la kulmeen heer sare oo furan. Aad bay muhiim u yihiin maadaama ay yihiin meesha ugu horreysa ee xiriirka ka dhexeeya ganacsiga iyo macaamilka; sidaas darteedna waa inaan si taxadar leh u samaynaa.
Ma doonayno in aan ku darno wax xayaysiis ah oo dabiicadda ah, sida soo jeedinta martigelinta ee la isku daray, ama kor loogu qaadayo qorshe taageero oo la fidiyay. Iimayllada noocan oo kale ah waxaa loo diri karaa macaamiisha ku hawlan, sida kuwa la furay ama ka sii wanaagsan, guji CTA ee iimaylka.
Qaybta 2 - Iimayl-ka Kordhinta
Tusaalaha iimaylka dusha sare ee loo diro macaamiisha mawduuca wadarta ah
Ujeedada iimaylka dusha sare waa in la baro macmiilka alaabta oo laga caawiyo inuu si dhakhso ah u gaaro yoolkiisa. Markaa, iimaylkayaga dusha sare, waxaan ku dari karnaa talooyinka sida:
Sida loo rakibo mawduuca wadarta
Sida loo rakibo plugins loo baahan yahay
Muujinta mareegaha ee lagu dhisay mawduuca
Ku xidh kanaalka taageerada haddii ay wax shaqayn waayaan
Qaar baa laga yaabaa inay isku daraan tillaabooyinka fuulista iyo iimaylka soo dhawaynta ah, kaas oo sidoo kale noqon lahaa ok!
Qaybta 3 - Emailka Cusbooneysii
Tusaalaha Cusboonaysiinta Mawduuca iimaylka la heli karo
Ku wargelinta macaamiisha cusboonaysiinta alaabtu waxay ka ciyaartaa door muhiim ah farxadda macaamilka iyo haynta nolosha meertada. Marka aan ku cusboonaysiino mawduuca sifooyin cusub, hagaajinta cayayaanka, ama hagaajinta waxqabadka, waa fikrad wanaagsan in aad iimaylka u dirto macaamilka xusuusin si loo cusboonaysiiyo dulucda.
Qaybta 4 - Iimayl-hayn
Tusaalaha Iimayl cusboonaysiinta WPExplorer
Aynu wajahno – farxadda macmiilka iyo sii haynta ayaa door aasaasi ah ka ciyaara guusha badeecada (ama ururka). Tusaalaha ugu weyn? Amazon. Haddaba waa maxay sababta aan uga hadlayno iimayllada haynta? Waa tan sababta:
Mawduuca guud ee WordPress waxa la sii daayay 2013, waxana uu kobcayay in ka badan afar sano hadda. Envato waxay siisaa iibsadaha 6 bilood oo taageero ah iyo cusbooneysiin ah sida ikhtiyaarka iibsiga caadiga ah ee mawduuca wadarta ah. Maxaa dhacaya marka macmiilku u baahan yahay taageero ka dib muddada taageerada hore loo bixiyo? Taasi waa meesha iimaylka cusboonaysiinta taageerada uu ku habboon yahay. Dhammaan macaamiishu uma baahna. Laakin waxa ay danta ugu wanaagsan ku jirtaa qofka iskii u shaqeysta ama wakaalad in uu iibsado taageero dheeraad ah haddii ay dhacdo in macmiilku uu leeyahay baahiyo "qurux badan".
Kicinta Ololaha Dhibicda ee iimaylka iyo wakhtiga
Wayn Hadda waxaan haynaa iimayladii. Laakiin goormaan dirnaa? Ma jiraan wax kiciya? Waan ku faraxsanahay inaad weydiisay! Halkan waxaa ah miis muujinaya kiciya ololaha faleebbooyinka iimaylka iyo waqtiyada macno samayn doona inta badan mawduucyada WordPress ama plugins.
Magaca Ololaha farganka Jadwalka
1 – Ku Soo Dhawoow Emailka Marka qofku iibsado mawduuca Degdeg
2 - Iimayl-ka-saarista Dadka furay iimaylka soo dhawaynta waxa ay noqon karaan kuwa ugu horeeya. Kuwo kale waxay heli karaan iimaylka dusha sare wax yar ka dib. Laba maalmood dadka furay emailka soo dhawaynta ah. Afar maalmood qof kasta oo kale.
3 – Cusbooneysii iimaylka Marka update la heli karo Degdeg
4 – Haysashada iimaylka Marka qorshaha taageerada macmiilku dhacayo Shan bilood iyo labaatan maalmood ka dib iibsashada. Tani waxay siinaysaa macmiilka toban maalmood si uu go'aan u gaaro.
Qaybin Dheeraad ah oo ku salaysan Hawsha Isticmaalaha
Ilaa hadda, waxaan u abuurnay olole dhibco iimaylka ah MailChimp oo loogu talagalay dadka ka iibsaday mawduuca wadarta guud ee Themeforest.
Haddii aan sii kala siino kooxdan, markaas waan u kala bixi karnaa firfircoon iyo firfircoon macaamiisha. Waa ayo, miyaad waydiisaa? Waa kan:
Waxaan qeexi lahayn firfircoon macmiilka sida qof leh emaylka wanaagsan-furan iyo garaac-la qiimeeya. Si kale haddii loo dhigo, macaamiisha firfircoon waa dadka furaya, akhriya oo gujinaya xiriirinta iimayllada loo soo diro
Waxqaban la'aan Macaamiisha dhanka kale, waa dadka emailka aad u liidato ee furan, ie, ma furaan emails loo soo diray.
Waxay u badan tahay in macmiilka firfircooni uu ku siin doono jawaab celin ku saabsan horumarinta alaabta ama su'aalaha jawaab celinta. Waxaan u diri karnaa iimayl sida:
Haddii aad hal shay ka beddesho Total, maxay noqon lahayd?
Waa maxay niyad jabkaaga ugu weyn ee mawduuca guud?
Intercom waxay haysataa boosteejo aad u fiican oo ku saabsan faallo-celinta iyo iimayllada ka-qaybgalka iyo sida Invision u isticmaalay maalmihiisii ​​hore si loo cabbiro halka ay maanta joogto. Halkaas ayaad ku haysaa. Ololaha dhibicda iimaylka aasaasiga ah ee dadka iibsaday mawduuca wadarta!
Ololaha dhibcooyinka iimaylka ayaa ah mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalinayo macaamiishaada inay ku hawlan yihiin balooggaaga WordPress, badeecada ama adeeggaaga. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah safarka macaamiisha, kaas oo ugu dambeyntii saameyn ku leh ganacsigaaga.
Waxaas oo dhami waxay keenaysaa su'aasha - ololeyaasha dareeraha iimaylka dhab ahaantii ma shaqeeyaan? Haa, way sameeyaan. Si fiican, dhab ahaantii. Marka loo eego cilmi-baaris ay soo aruuriyeen kooxda ka dambeysa emaylka-suuqgeynta Emma, ​​iimaylo la beegsaday ayaa soo saaraya 18-jibaar dakhli ka badan marka loo eego kuwa caalamka laga baahiyo. Waxa kale oo ay ogaadeen in dadka akhriya fariimahaaga dhibco ah ay aad ugu dhow yihiin inay gujiyaan isku-xiryada iyaga ku jira, oo leh a 119% ayaa kordhay heerka gujinta laga soo diro emails dhibco ah.
Haddaba maxay kula tahay? Ma bilaabi lahayd inaad hirgaliso ololeyaasha dhibco iimaylka? Maxaad ka bedeli lahayd fariimaha dhibco ee aan ku isticmaalnay tusaalaha alaabta WordPress? Noogu sheeg faallooyinka hoose!
Tillaabo-Tallaabo Hagitaan lagu bilaabayo Blog-ga WordPress sanadka 2021
Ku samee Shaxano Kajawaabi kara wpDataTables